Hofisi kudanana hukama pakati pevashandi hunopfuura bhizinesi. Mamwe makambani anofuratira izvi, mune mamwe masangano zvakarambidzwa zvachose, kusvika uye kusanganisira kudzingwa. Asi iwe haugone kuraira moyo wako! Naizvozvo, kana nyaya yakadaro ikaitika, zvakakosha kutevedzera mitemo yekuchengetedza kuitira kuviga hukama.
Hapana kutamba nerudo kubasa!
Munzvimbo yebasa, zvakakosha kuti urege zvachose nemumwe, kunyanya kana makamera ekucheresa akaiswa munzvimbo. Ehe, hazvina kurambidzwa kutaurirana zvine hushamwari, asi zvakakosha kusabvisa zvachose kutamba kworudo kubasa, mazano, kubata, uye zvimwe zviratidzo zvekudonha murudo kana kuwedzera kufarira.
Iwe unofunga kuti hapana anozozviona here? Sei, kwete kudaro! Kukurukurirana kwakadaro kunokurumidza kuverengwa nevamwe vanhu. Uye, hongu, bonde munzvimbo yebasa hazvigamuchirwe.
Kana iwe uchidanana muhofisi, usashandise email yemakambani kutumira ese marudzi akanaka emeseji kana kutamba nerudo.
Rangarira kuti kero yemakambani haisi yako, uye wako mutariri maneja kana bhosi anogona kuitarisa chero nguva. Fungidzira kufara kuchaita kwavari kuverenga tsamba dzako.
Hapana nyaya yaunofanirwa kugovana ruzivo nezve yako yekudanana kwehofisi nevako vaunoshanda navo. Zvese zviri nyore apa! Munguva pfupi inotevera, ivo vacharamba vachimhan'arira kuvakuru vavo kana kuparadzira makuhwa.
Kana hazing ichirambidzwa zvachose, saka izvi zvakafanana nekudzinga. Iwe hausi muvengi webasa rako wega ... Uye hongu, hapana chikonzero chekuburitsa mapikicha akabatana pasocial network, taga mushandi mumufananidzo, nezvimwe.
Usave nenyaya dzerudo nevanhu vanogona kukudzinga basa. Izvi zvinofanirwa kunyorwa pasi subcortex sehunhu hwekuzvichengetedza. Izvo hazvitombodi kutsanangura kuti zvinogona kupera sei.
Semuenzaniso, rudo rwakapera, uye zvakave zvisina kugadzikana kune wako webasa kupunzika mune aichimbova shungu mazuva ese. Chii chaangaite? Nzira iri nyore ndeyekupfura uye kukanganwa.
Kurangana ndiwo mutemo wekutanga werudo kubasa
Kana hukama hwako hwaenda kure zvekuti iwe unomuka pamubhedha mumwe chete newaunoshanda naye, saka unofanira kuuya kuzoshanda wega. Kune matani enzira dzekuita izvi zvirinani. Semuenzaniso, kubuda mumotokari yewaunoshanda naye munzira dzinoverengeka pamberi pebasa, nezvimwe.
Usaite, chero zvodii mamiriro ezvinhu, kurongedza zvinhu munzvimbo yebasa, kunyangwe iwe uchifunga kuti hapana anokuona kana kukunzwa. Zvinoenderana nemutemo wehutsinye, panguva ino munhu angangopfuura nepahofisi ndokunzwa kana kukuona iwe mukubwinya kwese kwekutsamwa kwakarurama uye nehasha. Hazvina kuoma kufungidzira kuti une hukama hwakasimba pane kungoshanda chete.
Usadonhedze kudenhwa. Kufungidzira uye kuziva zvinhu zviviri zvakasiyana. Naizvozvo, kana vamwe vako vachifungidzira nezve chimwe chinhu, asi ivo vasina humbowo hwerudo rwako, iri ndiro dambudziko ravo. Unogona kunyange kutsamwa nekutsamwa uye kudzivirira pachena kukudzwa kwako.
Maitiro ekubvisa kudonha murudo: kuraira kubva kune wepfungwa
Pfungwa dzechirume muhukama nemukadzi
Rudo rwechokwadi pakati pemurume nemukadzi - ruriko here?
Godo chiratidzo cherudo here?
Sei usingatambe kupenga nekusurukirwa: kuraira kwechiremba wepfungwa
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,473 masekondi.